Ọghọm ọgba tum tum ọkàiwu | Los Angeles Personal mmerụ Lawyer,houston personal injury lawyer
Home » mberede ọkàiwu » Ọghọm ọgba tum tum ọkàiwu
Weather yiri ka igwu egwu enweghị isi ọrụ ọgba tum tum mkpọka, Otú ọ dị, ọ bụ uru arịba ama na 90+% nke ọkwọ ụgbọala na-onwe kụziiri na-enweghị iwu ọzụzụ na-akwọ ụgbọala nchekwa.
-Akpata ihe mberede
E nwere ọtụtụ so akpata ya ka ọgba tum tum ihe mberede, ma isi na-akpata na-akwọ ụgbọala njehie na odida na-erube isi aka nri nke ụzọ. Ọzọ so akpata ya bụ ndị ogbenye n'ụzọ ọnọdụ, omume rụrụ ihe onwunwe (gravel, ájá, udu mmiri epupụta na ahịhịa Clippings) n'okporo ụzọ, ọsọ, -aṅụ oké mmanya, ekewaghi okporo ụzọ, awat ke okoneyo, enweghị nchekwa ọzụzụ, ọgba tum tum ọdịda, ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga ihe ndị dị ka iju ihe ma ọ bụ anụmanụ na n'etiti okporo ụzọ.
mberede ọnụ ọgụgụ
Ọ bụ ezie na ọgba tum tum na-anọchi anya naanị banyere 3% nke niile ugbo ala, ọgba tum tum mkpọka ego na ihe 13% nke niile anwụ n'ihe mberede.
Ihe dị ka ọkara nke ihe mberede nwere collisions na ndị ọzọ ụgbọala, atọ-ebe nke ha na-frontal collisions, na nke abụọ n'ụzọ atọ bụ n'ihi ọkwọ ụgbọ ala njehie na naanị banyere 3% ka ụgbọala ọdịda. Na ọtụtụ mkpọka onye na-akwọ bụ n'etiti 16 na 24 afọ, na 95% ma ọ bụ otú ha bụ nwoke na ọkara n'ime ha na-adịghị ihe karịrị 5 ọnwa nke ịnya ahụmahụ.
Ọkara nke ndị na-egbu egbu ihe mberede na-aba n'anya metụtara na ọ dị mkpa iburu n'obi na ọtụtụ mgbe e nwere nanị ihe dị 2 sekọnd iji zere a nkukota! About 95% nke niile ihe mberede ịkpata ihe mmerụ ahụ na ọ bụ ihe mwute ịhụ na ọ bụ naanị ihe 40% nke ha nwere nchekwa okpu agha (ọnụ ọgụgụ na-egosikwa na ojiji nke nchekwa okpu agha significantlyreduces isi na olu unan).O kwere omume injuriesIt dị mkpa banyere na ojiji nke okpu agha na-adalata na ọgba tum tum okuku ọnwụ ndị na ịrị elu. The n'ụdị mmerụ na a ọgba tum tum okuku nwere ike ịbụ na oké njọ di iche iche n'ihi enweghị nchedo (dị ka na ụgbọ ala ma ọ bụ van): isi na olu unan, ọgidigi azụ mmerụ, ọkpụkpụ gbajiri agbaji, ụbụrụ unan, laceration, metụworo, ọdịdị ihu unan, mkpọnwụ, na oké njọ aka na ụkwụ unan nke pụrụ ịgụnye amputations.What m ga-eme bụrụ na nke ihe mberede?-Achọ ọgwụ anya ọbụna ma ọ bụrụ na gị unan ka ihe ga-nwayọọ.
Na-niile gị mebiri emebi gia, idetu ihe ọ bụla i nwere ike icheta, idebe ihe nile receipts, na kpọtụrụ ọghọm ọgba tum tum ọka iwu. Mme ndudue ka m ga-ezere?Adịghị agba ịnyịnya na-enweghị inspecting gị ọgba tum tum: nnukwu ọkụ ihu, ezumike ìhè, atụgharị n'ókè, enyo, oge izu, taya, na-elele na nkpọrọ (n'ihi yinye-chụpụrụ n'azụ wiil) n'ihi na kwesịrị ekwesị larịị nke erughị ala na ihe ịrịba ama nke eyi na dọkatụrụ adọka.
Mgbe ị ga-agba mgbe n'okpuru nduzi nke bekee ma ọ bụ na ike gwụrụ ma ọ bụ nwere ntakịrị ụra. Ime ma ọlị ka a n'aka na-enweghị n'aka signal, -eyi na-amị amị uwe, ma ọ bụ na-eyi nọkwa gia na siri ike ịhụ, karịsịa mgbe ọchịchịrị. Adịghị mgbe tailgate ma ọ bụ kpaa na nke okporo ụzọ ma ọ bụ agba ịnyịnya na n'ubu nke ụzọ!Olee otú iji gbochie ihe mberede?Mgbe na-aṅụ na ụgbọala, -eleghara na-eyi okpu agha (ọ bụ banyere 37% irè n'ihi na ọkwọ ụgbọ ala na 41% n'ihi na njem).
Nọrọ asian on nchekwa na okporo ụzọ iwu, eyi kwesịrị ekwesị uwe, anya na ihu nchedo (ekwuchi akụkụ ahụ nwere ike unyi tattoos n'oge a ọkọ na okporo ụzọ, ndị siri ike wepu), na-eji ntị plọg iji belata anụ mbibi sitere ifufe mkpọtụ. Always eleghara, akpan akpan ke ọjọọ ihu igwe ọnọdụ, na mgbe obi ọ bụla ụgbọala na-enye gị nri nke ụzọ (ọ ka mma mbà nri gị na-aga karịa inwe ihe mberede)!
Ụfọdụ ndị na iwu ndụmọdụ
Motorcycle ihe mberede, ka ọ bụla ọzọ ihe mberede, ha gbagwojuru anya iwu chọrọ.
Ọ bụghị nanị na a mma ego, ọ nwere ike na-azọpụta gị a otutu oge na nkpasu-iwe na ọrụ inshọransị. Ọ bụrụ na ị na-hụrụ ka ụta dịịrị ihe mberede, ị pụrụ iche ihu mma, ọrụ obodo, ma ọ bụ ke kasị njọ ahụ, mkpọrọ (karịsịa ma ọ bụrụ na mmanya na-agụnye).
Legal pụtara nkịta ata aru